Dowladda Ruushka oo Sheegay Inay Isaga Baxday Maxkamadda Caalamiga ee ICC (VIDEO) - Hablaha Media Network
Dowladda Ruushka oo Sheegay Inay Isaga Baxday Maxkamadda Caalamiga ee ICC (VIDEO)
HMN:- Dalka Ruushka ayaa shaacisay in wareegto ka soo baxday xafiiska Madaxweynaha dalkaasi ee Vladimir Putin uu laalay in wadanka Ruushka uu xubin kasii ahaado Maxkamada Caalamiga ah ee Danbiyada ICC oo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherland.
Maxkamada ICC ayaa lagu dhisay heshiiskii (Rome Statute) ee sanadkii 1998, waxaana dhismaha Maxkamada markaasi saxiixay in ka badan 100 wadan oo xubno ka ahaa markaasi.
Maxkamada ayaa shaqadeeda biloowday sanadkii 2002 waxayna noqotay Maxkamadii ugu horeysay ee Danbiyada oo Caalami ah ee awood loo siiyay si joogto ah inay u baarto danbiyada Dagaal, Xasuuqa iyo danbiyada kale ee ka dhanka ah Xaquuqul Insaanka.
Go’aanka Ruushka ayaa yimid kadib markii Warbixin ka soo baxday Qaramada Midoobay lagu sheegay in Ruushka uu danbiyo ka dhan ah xaquuqul Insaanka ka geystay Jasiirada Crimea oo ay kala wareegeen wadanka Ukraine.
Wadanka Ruushka ayaa saxiixay sanadkii 2000 inuu xubin ka noqonayo dalalka hoostaga Maxkamada ICC, laakiin maxkamadan ayaa lagu ee deynayaa inay adeegsadaan dalalka Reer galbeedka, si ay ugu cagojugleeyaan madaxda dalalka kale ee xukunka ahaya.
Maxkamada ICC ayaa kaloo lagu eedeynayaa inay qaadaan oo kaliya dambiyada ay galaan madaxda dalalka Afrika, waxaana dhawaan heshiiska maxkamadaasi isaga baxay dalal badan oo Afrikaan ah, kuwaasi oo madaxdoodu lagu eedeynayo inay xasuuqyo ka geysteen dalalkooda.